Loksewaguide Online Exam
शाखा अधिकृत-राजनीति शास्त्र (Rs500) - Old
शाखा अधिकृत – राजनीति शास्त्र (Rs. 500)
लोकसेवा प्राक्टिस पेपर (series -2) (Rs. 85)
Welcome to Loksewaguide Online Exam(Beta Version)
Generate Exam Question for शाखा अधिकृत वा सो सरह शाखा अधिकृत प्रथम पत्र (प्रशासनिक अभिरुची परीक्षण) को परीक्षा १०० पूर्णांकमा १ घण्टा ३० मिनेट समय प्रदान गरी संचालन गरिने भएता पनि हाल परीक्षण अबधीका लागि English Language Competence Test बाहेकको सामग्रीलाई १०० अंकमा रुपान्तरण गरी प्रस्तुत गरी प्रतिप्रश्न १ अंकको दरले १०० प्रश्नहरु राखिएको छ ।
Generate Exam Question for नायव सुब्बा वा सो सरह
नायव सुब्बा प्रथम पत्र (सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण) को परीक्षा १०० पूर्णांकमा ४५ मिनेट समय प्रदान गरी संचालन गरिन्छ । यसमा प्रतिप्रश्न २ अंकको दरले ५० प्रश्नहरु राखिएको हुन्छ । लोक सेवा आयोगद्वारा उपलब्ध गराइएको पाठ्यक्रम मुताविक सामान्य ज्ञानका लागि ६० अंक र सामान्य बौद्धिक परीक्षणका लागि ४० अंकका आधारमा प्रश्नहरु निर्माण हुने गरी यो परीक्षा संचालन गरिएको छ ।
Generate Exam Question for खरिदार वा सो सरह
खरिदार प्रथम पत्र (सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण) को परीक्षा १०० पूर्णांकमा ४५ मिनेट समय प्रदान गरी संचालन गरिन्छ । यसमा प्रतिप्रश्न २ अंकको दरले ५० प्रश्नहरु राखिएको हुन्छ । लोक सेवा आयोगद्वारा उपलब्ध गराइएको पाठ्यक्रम मुताविक सामान्य ज्ञानका लागि ७० अंक र सामान्य बौद्धिक परीक्षणका लागि ३० अंकका आधारमा प्रश्नहरु निर्माण हुने गरी यो परीक्षा संचालन गरिएको छ ।